संक्रमितको उपचार नगर्नेलाई जेल हाले हुन्छ : डा. जागेश्वर गौतम « AayoMail
संक्रमितको उपचार नगर्नेलाई जेल हाले हुन्छ : डा. जागेश्वर गौतम
सरकारले किन यति चाँडै महामारीको व्यवस्थापनबाट हात झिक्न खोज्दैछ? आयोमेलकर्मी पुष्पराज चौलागाईंले स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमसँग यसबारेमा थप कुरा बुझ्न खोजेका छन्–